२७ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार बहादुर भवन पुगे । त्यहाँ निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले अहिलेसम्म भएको तयारीबारे ब्रिफिङ मात्र गरेनन्, बजेट र बन्दोबस्तीका सामान लगायतको आवश्यकताबारे पनि जानकारी गराए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन तयारीको काम निरन्तर […]
प्रधानमन्त्री ओली रोएकै हुन् कि चिसो लाग्यो ?
२३ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कठोर एवं दह्रो मुटु भएका राजनीतिज्ञ मानिन्छन् । तर, शुक्रबार नारायणहिटी अगाडि आयोजना गरिएको आमसभामा बोल्दै गर्दा ओलीले मञ्चबाटै आँशु पुछे । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाकार सूर्य थापाका अनुसार जनसागर देखेर भावुक बनेपछि प्रधानमन्त्रीले आँशु खसालेका हुन् । तर, स्वयं ओलीले चाहिँ ‘चिसोले गर्दा आँशु आएको’ बताएका छन् […]
‘साइबर सेना’ले फैलाएको भ्रमको शिकार बने प्रधानमन्त्री
२३ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो फेसबुक टाइमलाइनमा राखेको नारा छ– सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने । तर, ‘सत्यसँग नलड्ने’ उनै ओली शुक्रबार नारायणहिटी अगाडि भएको आमसभामा भने ‘फेक न्युज’को शिकार बने । प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले आयोजना गरेको आम हड्तालको निन्दा गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘फेक न्युज’ को सहारा लिए । प्रधानमन्त्री ओलीले […]
२३ माघ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्ट (नेकपा) प्रचण्ड-माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान मिचेर गरिने चुनाव अवैधानिक हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका छन् । यो असंवैधानिक भएको भन्दै परेको १३ वटा रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भइरहेको छ । […]
केपी ओली माओवादी जनयुद्धप्रति सकारात्मक भएकै हुन् त ?
११ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको समूहलाई विगतदेखि नै माओवादी जनयुद्धप्रति आक्रमक र कठोर मानिँदै आएको थियो । नेकपा विभाजनपछि त उनी माओवादीप्रति झनै आक्रामक बन्लान् भन्ने धेरैको अनुमान थियो । किनभने, ओली समूहका नेता-कार्यकर्ताले माओवादी नेताहरुलाई जंगली, बाँदर, १७ हजार मानिसका हत्यारा, हिंस्रक आदि उपमाहरु दिने गरेका थिए । तर, […]
७ माघ, काठमाडौं । कामचलाऊ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका छन् । चुनाव गर्ने मात्र होइन, दुईतिहाई बहुमत ल्याउने, ५० लाख समानुपातिक मत प्राप्त गर्ने र प्रत्यक्षतर्फ एक्लै १६५ सीट जित्ने दाबीसमेत ओलीले गरेका छन् । प्रचण्ड– माधव समूहका नेताहरुमा चुनाव जित्ने आँट […]
७ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी संविधान धरापमा परेको टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । यो नेपालको आठौं संविधान हो । १३ माघ २००४ मा राणा प्रधानमन्त्री पदम शम्शेर जबराले जारी गरेको ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन’लाई नेपालको पहिलो संविधान मानिन्छ । हाम्रो संवैधानिक इतिहास खोतल्दा […]